Xasan Sheekh oo ka hadlay sababta uu u yimid Muqdisho | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Xasan Sheekh oo ka hadlay sababta uu u yimid Muqdisho
Xasan Sheekh oo ka hadlay sababta uu u yimid Muqdisho
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa saakay waxaa lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Soo dhaweynta Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa waxaa ka qeyb qaatay guddi ay dowladda u xil saartay soo dhaweyntiisa oo uu horkacayay Wasiirka amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow (Ducaalle).
Xasan Sheekh oo warbaahinta la hadlay ayaa marka hore u mahadceliyay dhammaan dadka ka qeyb qaatay soo dhaweyntiisa, wuxuuna sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu dalka dib ugu soo laabto mudo sanad ka badan oo uu ku maqnaa dalka Turkiga.
Wuxuu sheegay sababta ugu weyn ee uu u yimid inay tahay inuu xog ogaal u noqdo dalka, islamarkaana uu ogaado xaalada siyaasadeed, mid dhaqaale iyo dhan walba ee dalka uu marayo.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa sheegay intaasi kadib inuu la imaan doono ra’yigiisa siyaasadeed, maalmaha soo socdana ay jiri doonaan kulamo iyo wada sheekeysi caadi ah.
“Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan intii ka qeyb qaadatay soo dhaweynteyda, waan ku faraxsanahay inaan 18 bilood kadib ku soo noqday magaalada Muqdisho, waxaan u imiday inaan dalkii xog ogaal ka noqdo, inaan dadka kala war qaadano, marka aan intaas sameeyo ayaan la imaan doonaa ra’yigeyga siyaasadeed.”. Ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Safarka imaanshihiisa magaalada Muqdisho Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo 10-ka bisha soo socota la filayo inuu furmo Kalfadhiga Baarlamaanka Soomaaliya, maadaama Xasan Sheekh uu yahay Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka dalka.